Beautiful Horn of Africa: WALAALKII XASADKA AHAA
Goobtu waa xeryaha qaxootiga Kiiniya mid ka mid ah oo Soomaali badanoo soo barakacay ay degganyihiin.
Labo walaalo ah ayaa midkood labo wiil oo uu dhalay loo diray Mareykanka hab qaxootinimo. Wax yar kadib, wiilashii shaqo ayey billaabeen. Lacag aan kala joogsi laheyn ayey aabbahood u soo xawili jireen. Odeygii wuxuu is yidhi, alleylehe gaajo dambe is arki meysaan.
Odeygii wuxuu yeeshay raxan saaxiibbo ah oo uu qaadka u gado, kii la dhashayna wuu illoobay oo waxba uma uusan garan. Walaalkiisi ayaa dhowr jeer baryey bal inuu mucaawino u fidiyo maadaama kuwa debedda jira uu adeer u yahay ayna lamid yihiin kuwa asaga uu dhalay.
Muddo saddex sano ayey wiilashii lacag soo xawilayeen ayadoo adeerkoodkii laxmiga ahaana uu ka qatanaa. Maalin maalmaha kamid ah ayaa odeygii wiilasha dhalay loo soo diray lacag buuran. Walaalkiisi oo la socday lacagta la soo diray, ayaa ugaga hortagay xawaaladda wuxuuna ka codsaday inuu wax siiyo maadaama gurigiisa aanan dab laga shidin oo carruurtiina ay ka qatan yihiin. Wuxuu ugu jawaabay, "wax micna leh layma soo dirin oo waa in yaroo aan deyn isaga bixinaayo."
Kama uusan daba harine, asagoo is qarinaya ayuu daba galay kana soo kor dhacay walaakii oo goobta qaadka lagu iibiyo lacagta firdhinaya. Intuu garabka ka taabtay ayuu ku yiri, "ha iska dhammeyn lacagta waayo maanta ayaa kuugu dambeysa lacag damboo wiilashaada kuu soo diraan."
Dhowr maalmood kadib, kii wiilasha Mareykanka jiray dhalay ayaa telefoon qof ay qaraabo ahaayeen u soo diray una sheegay in labadii wiil midkood gaari jiiray oo uu geeriyooday, kii kalena uu waashey oo marada tuuray.
Posted by Adan Makina at 5:54 PM